Vonjimaika… maharitra | NewsMada
Par Taratra sur 24/08/2019
Antananarivo tsy vita indray andro! Io ny fanamarinan-tenan’ny tomponandraikitra manome fahazoan-dalana ny mpivarotra gaboraraka hanoko entana amoron-dalana… faritana mazava. Ny eo anivon’ny Antananarivo III aloha no mampiditra an-kizo ny fiainam-bahoaka amin’izay tsy fanarahan-dalàna izay. Ahina hiitatra fa… ny ratsy eto no fianatra raha izao fandaminana kitoatoa izao: manakorontana fa tsy mandamina, na inona lazaina sy fanamarinan-tena.
Tsy misy dikany ary tsy ahoana fotsiny izao ny hoe: ny arabe ho an’ny fiarakodia, ny sisin-dalana ho an’ny mpandeha an-tongotra, ary ny tsena ho an’ny mpivarotra. Inona na ahoana ny hiafaran’izao baranahiny tanteraka izao? Tsy omen-dalana aza ny mpivarotra amoron-dalana, manao ny ataony izay ela izay. Vao mainka fa hoe… Aoka re e! Aza gaga raha ho fanariam-pako ranon-dolana ny arabe, na ho fahandroan-kanina sy fisakafoana ny sisin-dalana… Tsy efa izany ve amin’izao?
Mbola fanamarinan-tenan’ny tapi-dalan-kaleha koa fa vahaolana vonjimaika ihany, hono, izao. Tsy efa izay ve ny natao teto Antananarivo Renivohitra hatramin’izay? Natao hoe vonjimaika, ohatra, ny fiantsonan’ny taksiborosy eny Fasan’ny Karana, nefa firy tao-maty eo ihany? Vonjimaika maharitra, raiki-tampisaka, tsy mahafa-bela… Saika toy izay avokoa ny nanaovana ireny tsena sy ny mpivarotra amoron-dalana raiki-tampisaka rehetra ireny. Manampy trotraka izao…
Ny tomponandraikitra izao no manome fahazoan-dalana sy mampiana-dratsy ny vahoaka amin’ny tsy fanarahan-dalàna fototra amin’ny fiaraha-miaina sy ny fahaiza-miaina. Hampiady vahoaka? Mety ho mora ary ho maro ny loza fa mahazo alalana amin’ny tsy fanaraha-dalàna ny mpivarotra tsy ara-dalàna tsy amin’ny tsena. Na ny lalana sy ny arabe izao no atao tsena, fanariam-pako sy ranon-dolana, fipetrahana… ? Fanahiana izany amin’izay ho vokatr’izao gaboraraka izao.
Mba noeritreretina ve izany rehetra amin’ity hoe vonjimaika… ahina haharitra? Natao hitsinjo mialoha izay hitranga hatrany ny hoe mpitondra. Mbola mendrika izany ve amin’izao? Mila lava fisaina sy fijery, mijery sy mahita lavitra…